Waalli iyo Suuqgeyn | Martech Zone
Waalli iyo Suuqgeyn
Isniin, November 19, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Pat wuxuu leeyahay qoraal kale oo weyn oo ku saabsan boggiisa ku saabsan isbeddellada ka socda Australia halkaasoo maal-galiyayaasha isboortiga ay arkayaan hoos u dhac ku yimaada ogaanshaha sumcadda - in kasta oo ay sii wadaan inay wax isla sameeyaan. Waa maxay qeexida waallida?
Wareerku wuxuu sameynayaa isla isla markaana wuxuu filayaa natiijooyin kaladuwan.
Suuq Gelinta iyo Xayeysiinta Waallida
Meel kasta oo aan ka helno Wakaaladda Xayeysiinta ama Shirkad Suuqgeyn ah, waxaan ka helnaa tan miyaanay ahayn? Dadku waxay u muuqdaan inay jecel yihiin shaqadooda, iska indhatiraan xogta, waxayna sii wadaan inay ka shaqeeyaan aaggooda raaxada:
Wakaaladaha ku fiican Flash-ka waxay dhisaan goobo qurxoon, is dhexgal ah oo ku guuleysta abaalmarino laakiin cidina ma heli karto maxaa yeelay way iska indha tirayaan SEO.
Ganacsatada badan ayaa iska indhatiraya fududaanta bartilmaameedka waxyaabahaaga internetka ka dibna la yaaban sababta aysan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ugu dheganeyn.
Aqoon yahanada fiidiyowga waxay dhisaan goobo baaxad weyn oo ballaadh leh iyaga oo aan haysan qoraal qoraal ah oo taageeraya akhristaha caadiga ah.
Suuqgeeyayaasha suuqyadu waxay sii wadaan inay ku dabaqaan meeris kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira websaydhkooda, iyagoo iska indhatiraya rajadooda looga baahan yahay xiriir shaqsiyeed, daah furnaan iyo daacadnimo.
Suuqgeeyayaasha oo iska fogeeya warbaahinta baahsan ee khadka tooska ah maxaa yeelay waxay umuuqataa mid ka raqiisan. Haddii badeecadaadu tahay aalad duqow ah, bogagga jaalaha ah ama xayeysiiska loo qoondeeyey ee ku soo baxa joornaalka la bartilmaameedsanayo ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto maalgashiga suuqgeynta.
Dhexdhexaadinta ugu Wanaagsan waxay noqon kartaa Dhex-dhexaadinta aan laga yaabin
Suuqgele kasta ama wakaalad kastaa way ku fiican tahay warbaahinno gaar ah, laakiin waa dhif in hay'ad ama suuqyadu aysan iska indhatirin ama eryin dhexdhexaadiyeyaasha waxtar yeelan kara. Telefishanka, raadiyaha, joornaalka, boostada tooska ah, telemarketing, bogagga jaallaha ah, noocyada, kafaalaqaadka, sadaqada, tartamada, deeqaha waxbarasho, xubinnimada, baloog garaynta, fiidiyowga tooska ah, xayeysiinta lacag-gujinta, emaylka suuqgeynta, shabakadaha bulshada, habeynta mashiinka raadinta - dhammaantood kuwani waa dhexdhexaadiyayaal in do dadka gaadho. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sababo mid kasta oo ka mid ah kuwani ay ku caawin karaan ama xitaa suurtagal tahay inay carqaladeeyaan dadaalkaaga suuq-geynta.
Macaamiisha iyo Ganacsatadu Way Ku Raadinayaan
Furaha xulashada isku-darka suuqgeyntaada ayaa ah tijaabinta waxyaabahaas dhexdhexaadinta ah, isbarbardhiga natiijooyinka kuwa kale ee (kuwa la midka ah), aqrinta waraaqaha cad, raacitaanka hababka ugu fiican, iyo helitaanka isku dhafka ugu wax ku oolka badan si loo helo soo celinta ku habboon ee maalgashiga. Suuqleyda ayaa ka cabanaya taas dareenka macaamiisha ayaa sii yaraanaya laakiin gabi ahaanba waan diidanahay. Macaamiisha ayaa isku dayaya inay helaan aad marka aad leedahay badeecad ama adeeg sax ah, ha noqoto ganacsi macaamiil, ama ganacsi ganacsi. Shaqadaada ayaa ah inaad macluumaadka saxda ah hortooda hor dhigto waqtiga iyo goobta saxda ah.
Isbedelada Suuqgeynta Waqtiga
Waxaa jira aragti seddexaad oo ku saabsan suuqgeynta waana waqtigaas! Waxaan u muuqanaa inaan u fiirsano suuqgeynta sida jaantus goos goos ah, xisaabinta qayb kasta oo baayga ah iyo boqolkiiba boqolkiiba kheyraadka suuqgeynta ayaa ku habboonaan doona. Laakiin suuqgeyntu sidan uma shaqeyso. Marka ugu horeysa ee aad bilowdo shabakad bulsheed, iskudhafkaaga warbaahinta ayaa noqon kara mid si xarago leh u bixiya xayeysiinta iyo laga yaabee inuu kafaalo qaado tartamo si loo dhiso akhriska bilowga ah. Si kastaba ha noqotee, markaad haysato xubno kugu filan si aad u joogtayso koritaanka, ilahaaga ayaa laga yaabaa in sifiican loogu kharash gareeyo hagaajinta mashiinka raadinta maxaa yeelay taasi waxay ka faa'iideysan doontaa isticmaaleyaashaada 'content si loo dhiso koritaan dheeraad ah.
Jooji waalida oo naftaada ku riix inaad ka hor timaado xukunkaaga wanaagsan! Waxaad haysataa hub aad gacanta ku dhigto, ma jiraan xabad qalin ah.
Tags: Hubinta Noocalogo astaanta mucjisada caruurtaAstaanta chromeastaanta ehowastaanta farqigalogo google chromedarajada keywordlogodheerkeyword keyword
10 Maalmood oo Bidix ah: Fursadaada inaad ku guuleysato $ 1,000 waa 50%!
Xayeysiiska Bogga Hoyga?
Nov 19, 2007 saacadu markay tahay 1:00 PM
Waxaan markii ugu horreysay ka bartay qeexitaanka waalida zig ziglar, in kasta oo aanan garanayn cida la soo baxday tan hore. Waqti badan ayey qaadatay in la quusto, laakiin waa fariin muhiim ah oo u baahan in la maqlo.